Valanaretina covid-19 - Mitsabo tena miaraka amin’ny ankohonany ilay mpilomano • AoRaha
Manomboka ny fitsaboana ny valanaretina Covid-19 Razafindrainibe Harivola Marie Sarah, mpilomano malagasy kalaza fahiny, voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina. Miaraka tsaboina aminy ao an-trano ihany koa ny vady amanjanany na dia mbola tsy natao fitiliana aza.
« Izaho ihany no notiliana, tamin’ny 20 jona, raha tokony ho natao avokoa izahay telo mianaka satria miray trano ato avokoa », hoy izy. Nambaran’ny tao amin’ny hopitaly lehibe iray nanaovany fitiliana fa: « tsy ampy ny fitoerana singa avy alaina » ka nahatonga azy ireo tsy voatily. « Efa marary ny vadiko, amin’izao fotoana izao, ka izany no itsaboanay mianakavy kely tena na dia mbola tsy vita fitiliana aza », hoy hatrany izy.
Tsy mifidy olona
Misy mpitsabo manaramaro ny fahasalaman’izy ireo saingy tsy avy amin’ny Ivontoeram-pibaikoana amin’ny ady amin’ny Covid-19, araka ny paik’ady vaovao aloha, hatramin’ny omaly.
Isan’ireo marary nisafidy ny hotsaboina any an-trano izy. Araka ny nambaran’ny praiminisitra Ntsay Christian, afak’omaly alina, dia: « hisy ireo mpitsabo handray antanana ny fitsaboana sy hiantso matetika an’ireo marary manaraka fitsaboana any antrano ». Hatramin’ny omaly, ora nifampiresahanay, anefa dia mbola tsy nisy fiantsoana an-dry Harivola.
Nanapa-kevitra ny hihiboka ao an-trano sy tsy hivoaka mihitsy izy telo mianaka ireto mba hampihenana ny fiparitahan’ny valanaretina amin’ny olona any ivelany. « Tsy sasatra aho ny manentana antsika Malagasy rehetra amin’ny fanarahana ny fepetra hiarovana amin’ity valanaretina ity satria tsy mifidy olona ny fifindrany, indrindra ireo olona marefo, taizan’aretina, mitovy amiko. Miara-miasa amin’ny fitsaboana ihany koa anefa ny vavaka », hoy Razafindrainibe Harivola Marie Sarah.
Lanonana tetsy Analakely :: Niavaka ny fampisehoana samihafa nandritra ny matso
Fitsinjovana mpiasa amin’ny tsy miankina :: Manohy ny asany any an-trano ireo olona marefo ara-pahasalamana